Fifamindram-pahefana Sekretera jeneraly tao amin’ny Ministeran’ny toe-karena sy fitantanam-bola. | Douanes Madagascar
Ny zoma 08 martsa 2019 no notanterahina ny fifamindram-pahefana teo amin’ny sekretera jeneralin’ny MFB (SG /MFB) teo aloha andriamatoa Rajaobelina Falihery sy Raoelijaona Bien Aimé izay handray ny toerana vaovao.Tamin’io fotoana io ihany koa no namindran’andriamatoa Randrianarison Gabriel sekretera jeneralin’ny toekarena sy ny planina (SG Economie /plan) teo aloha tamin’andriamatoa Raolijaona Bien Aimé ihany ny fahefany. Marihina fa noho ny fiovana misy eo anivon’ny fitantanana dia natambatra ho iray ireo Ministera roa ireo ka ny Sekretera jeneraly vaovao Raolijaona Bien Aimé no hisahana izany andraikitra izany.
Raha nandray fitenenana andriamatoa ministra dia nanafatrafatra ny amin’ny fitohizan’ny asa,sy ny fanoloran-tenan’ny tsirairay ao anatin’ny fanajana ny kalitaon’ny asam-panjakana.Nambarany ihany koa ny tokony hirosoana amin’ny fandrosoana sy fampiroboroboana ny toe-karena.
Marihina fa andriamatoa sekretera jeneraly vaovao dia efa niandraikitra toerana ambony tao amin’ny samapandrahara maromaro tato amin’ny Ministeran’ny fitantanam-bola sy ny vola. (Tale tao amin’ny DGB, tale jeneraly tamin’ny ARMP ary DGCF, IGE).